आज विश्व सुुर्तीरहित दिवस, ५१ प्रतिशत नेपालीको मृत्युको कारक तत्व सुुर्ती | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home स्वास्थ्य आज विश्व सुुर्तीरहित दिवस, ५१ प्रतिशत नेपालीको मृत्युको कारक तत्व सुुर्ती
भक्तपुर । नेपालमा वर्षेनी ७ हजारलाई क्षयरोगी र २७ हजारलाई क्यान्सर रोगी बनाउने सुुर्ती र धुम्रपानकै कारण एकवर्षमा १५ हजार नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण ऐन कार्यान्वयनमा सरकारी उदासिनता र सेवनकर्ताको हेलचक्र्याइँकै कारण वर्षेनी अन्दाजी १० अर्व रुपैयाँभन्दा वढी धुवाँमा उड्ने गरेको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयका अनुसार सरकारले सालाखाला वर्षेनी ५ अर्व रुपैयाँ सुर्तीबाट कर उठाउने गर्दछ । एक अध्ययनअनुसार सुर्तीकै कारण हुने नसर्ने रोगको उपचारमा १५ अर्वभन्दा वढी खर्च हुने गर्दछ । सरकारले गत शनिवार घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ सालको बजेटले चुरोटमा ८ देखि १५ प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरेको छ भने विडी र सुर्तीमा १२ प्रतिशत कर वृद्धि गरेको छ ।
डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भे २०११ अनुसार ५२ प्रतिशत पुरुष र १३.३ प्रतिशत महिला सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्दछन । पुरुषमध्ये ३०% ले चुरोट र ३८% सुर्ति (खैनी, पराग) सेवन गर्दछन भने महिलामध्ये ९% ले चुरोट र ६% ले सूर्ति (गुुट्खा, पानपराग ) सेवन गर्दछन ।
स्वास्थ्य अधिकार तथा सुुर्ती नियन्त्र ण जिल्ला सञ्जाल भक्तपुरका संयोजक रत्नश्वरी चवालले नेपालका ५% गर्भवति महिलार ७% बच्चालाई दुधखुवाउने महिलाले चुरोट खान्छन भने ४% गर्भवतिमहिला र ६% दुध खुवाउने महिलाले सूर्ति सेवन गर्दछन ।
५१% भन्दा वढी नेपालीको मृत्यु सुुुर्ती सेवनका कारण उत्पन्न हुने नसर्ने रोगवाट हुने गरेको पनि उनले बताइन् । दम,खोकी, क्यान्सर, मुुटुरोग जस्ता नसर्ने रोगको कारण सुुर्ती सेवन भएकाले यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारी र जनस्तरबाट अभियान चलाउनुु पर्ने उनको ठम्याइ छ ।
विश्व सुर्तीरहित दिवसको अघिल्लो दिन सोमबार भक्तपुरको कमलविनायकमा जनजागरण अभियान चलाउँदै गरेकी स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण जिल्ला सञ्जालका संयोजक चवालले सुर्तीले जनस्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक असरकाबारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, पाठ्यपुस्तकमा सुर्तीजन्यपदार्थ, क्षयरोग, क्यान्सरलगायतका रोगहरु लाग्दछ भन्ने सचेतनामुलक पाठलाई निरन्तरता दिइ विद्यालय तहमा नै व्यवहार परिवर्तन गराउने रणनीति बनाइनुपर्ने बताइन् ।
अप्रत्यक्षधुम्रपानअर्थात अरुले गर्ने धुम्रपानबाट पनि १०० मीटर वरपरसम्मउत्तिकै असर गर्ने भएकाले धुम्रपाननगर्नेहरुको अधिकार रक्षागर्न जनजागरण अभियानआवश्यक रहेको उनको ठम्याइ छ ।
नेपालअर्वुदरोग निवारण संस्थाभक्तपुरकाउपाध्यक्षविवेकमानकर्माचार्यले भने,९८ प्रतिशतयुवाहरुलाई र सालाखाला ९५ प्रतिशतलाई धुम्रपानबाट हुने हानीबारे जानकारी छ । उसैंले सार्वजनिक स्थलमाधुम्रपान गरी सवैलाई रोगीबनाइ दिन्छ । तसर्थ सरकारले प्रहरी खटाएर कानुनबमोजिम दण्ड सजायगर्नुपर्दछ । ’
जनजागरण अभियानमा सरिक नेपाल स्काउटका पूर्व सचिव रामगोपाल कर्माचार्यले जुन देशमालागू पदार्थ मादकपदार्थका दुव्र्यसनीहरु वढी हुन्छन् , त्यो देशले प्रगतिगर्न नसक्ने बताउँदै देशको कर्णधार र देश विकासका साझेदार युवाहरु नै वढी लागू पदार्थको दुव्र्यसनी भइदिए पछि उनीहरुको कार्य क्षमतामा ¥हास आउने भएकाले जागरण र कार्वाही अभियानसँग सँगै लानुपर्ने खाँचो औंल्याए ।
स्वास्थ्यकर्मी धनमान श्रेष्ठले सुर्ती सेवनले प्रजनन् स्वास्थ्यमा समेत असर गर्ने, शरीरको स्वरुप विग्रिने, छालामा चमकता हट्दै गइचाउरी पर्ने लगायतका कुरा जनतालाई थाहादिएको खण्डमा भविष्यका कर्णधार युवाहरुको भविष्य राम्रो भइ देशलाई योगदान पुग्ने बताए ।
निष्कृय धुम्रपानबाट चाडो चाडो सर्दी लाग्न,े मध्यकानमा संक्रमण र कानेगुजी जम्ने, खोकी र श्वास बढ्ने, नाक बजाएर सास फेर्ने, न्युमोनिया र ब्रोङ्काईटीसको जोखिम बढ्ने, फोक्सो कमजोर हुने, दम वढ्ने भएकाले आफ्नो वरपर धुम्रपान गर्न दिन नहुने उनको सुुझाव रहेको छ ।
सूर्ति सेवन छोड्दा हुने फाइदाहरु
. सूर्ति छोड्दा तपाईलाई हृदयघात, मुटुरोग तथा क्यान्सर जस्ता स्वास्थ्य समस्या हुने सम्भावना कम हुनेछ ।
प्रजननअवस्थामा हुनुहुन्छ भने तपाईको गर्भ रहने क्षमतामा कमी आउने छैन ।
गर्भवती हुनुहुन्छ भने सूर्ति सेवन छाड्नाले तपाईको बच्चा स्वस्थ जन्मने सम्भावना बढेर जान्छ ।
तपाईसँगै बस्ने परिवार विशेष गरी तपाईका सन्तानहरु बढी स्वस्थ रहनेछन् ।
सूर्ति सेवन गर्न लाग्ने रकमलाई भोजन, स्वास्थ्य सेवा, आवास तथा शिक्षा जस्ता अन्य फाइदाजनक क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्नु हुने छ ।
तपाईको मुहार चम्किलो हुनेछ । सूर्तिले छालालाई चाउरी पार्दछ । उमेर नपुग्दै बुढो जस्तो पार्छ र दाँतमा पहेंलो कस जम्छ । सूर्ति सेवन त्याग्नाले चाँडै बुढ्यौली लाग्न रोकिन्छ र छाला स्वस्थ हुने र त्यसमा कान्ति फर्कनेछ ।
तपाईमा आत्मविश्वास बढ्नेछ । आफनो जीवनमाथि काबू राख्न सकेकोमा तपाईमा आत्मविश्वास जाग्नेछ । सूर्ति त्याग्नाले तपाईमा हिम्मत बढ्नेछ ।
सुुर्ती कसरी छोड्ने ?
-छोड्ने मिति÷भाखा तोकेर तयार बन्नुहोस् ।
-छोड्ने अवधि भरी मार्गदर्शनका लागि छोडपत्र आफनो साथमा राख्नुहोस् र पढ्ने गर्नुहोस् ।
-सूर्तिको सम्झना दिलाउने कुनै बस्तु छन् कि भनी आफनो घर, कार्यालय, कार आदि हेर्नुहोस् र छन् भने हटाउनुहोस् । उदाहरणका लागि एस्ट्रे, चुरोट, लाइटर, खैनीका पुरिया आदि ।
-आपूmले सूर्ति छोड्ने प्रण गरेको कुरा मित्रहरुलाई जानकारी दिनुहोस् । यसो गर्दा —तपाईलाई आफनो अठोटमा अडिन बल पु¥याउनेछ । तपाईका मित्रहरुले तपाईलाई सूर्ति छोड्न र छोडेपछिको समस्यामा साथ दिन सक्नेछन् ।
सूर्ति छोड्नका लागि आपूmलाई शारीरिक रुपले तयार गर्न सामान्य व्यायाम र आराम गरेर र प्रशस्त तरल पदार्थ पिएर तयारी हुनुहोस् ।
सूर्ति सेवन गर्ने तपाईको आत्मबललाई कमजोर तुल्याउने हुनाले मादक पदार्थ नपिउनु होस् ।
आफनो सौख पुरा गर्ने काममा लाग्नुहोस् । जस्तै पढ्न रुचाउनु हुन्छ भने चाखलाग्दा पुस्तकहरु खोजेर पढ्नुहोस् । खेलकुद्यमा चाख छ भने त्यता तिर लाग्नुु होस् ।
लामो सास फेर्ने ः पाँच गनुन्जेलसम्म लामो सास लिनुहोस् । फेरि पाँच गनुन्जेल विस्तारै सास छोड्नुहोस् ।
आराम गर्नुहोस् ः आरामदायी स्थानमा रहनुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्, हृदय देखि नै आराम लिने कोशिस गर्नुहोस् । सूर्ति बिनै म बाँच्न सक्छु भनी मनमनै सोचिरहनु होस् ।
आफनो मनलाई अन्यत्रै लगाउनुहोस् ः केही अन्य काम गर्नुहोस्, गीत सुन्नुहोस्, हिड्नुहोस्, पुस्तक पढ्नुहोस, फोन उठाई साथीसँग बात मार्नुहोस् ।
पटकपटक पानी वा फलफुलको रस पिउनुहोस् ः प्रशस्त पानी पिउनाले तपाईको शरीरमा रहेका सूर्तिको लत लगाउने वस्तु निख्रन मद्दत पु¥याउँछ ।
नियमित व्यायाम गर्नुहोस् ः नियमित व्यायाम गर्नाले तपाईको तनाव तलतल कम गर्न सहयोग पुग्छ । यसो गर्दा तपाईलाई आरामको महशुस हुन्छ र तौल बढ्न नदिन सहयोग पु¥याउँछ ।
स्रोत ः स्वास्थ्य अधिकार तथा सुुर्ती नियन्त्रण जिल्ला सञ्जाल, भक्तपुर